लेखनाथ, १९ असोज। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ११ औ महाधिवेशन उम्मेदवारी मनोनयमा सस्थागत सदस्यतर्फ लेखनाथ हार्डवयर एसोयिसनका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन भट्टराई र एशोशियट सदस्य तर्फ वाटिका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका प्रशान्तराज धमला निर्विरोध निवाचित भएका छन्। संघको विधान अनुसार सस्थागत एक र एशोशियट सदस्य एक जनाको व्यवस्था भए अनुसार सस्थागततर्फ भट्टराई र एशोशियटतर्फ धमलाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले दुबैजना निर्विरोध भए तापनि… पुरा पढौ
काठमाडौँ, ९ असोज ।नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको तीसवर्षीय कार्यकाल सीमा हटाएर ५८ वर्ष उमेर कायम गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले तीसवर्षीय कार्यकालको व्यवस्था हटाएर थप रायसल्लाहका लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी भने ३० वर्षीय सेवावधि हटाउन नहुने पक्षमा थिए । निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकाले समान… पुरा पढौ
मातृभूमि सहकारीको सातौं साधारण सभा
पोखरा, ९ असोज। मातृभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखराको सातौं वाषिर्क साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभा उद्घाटन गर्दै सभासद टुकराज सिग्देलले सहकारी ऐनले सहकारी अभियानमा रहेका केही अवरोधलाई सहज बनाएको उल्लेख गरे। उनले सरकारी, निजी र सहकारीको पुँजी एकीकृत गरी लगानी गर्न सकियो भनेमात्र देश सम्मृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने बताउ । उनले सहकारीमा सेयर सदस्यको जति सक्रिय सहभागिता… पुरा पढौ
पोखरा, ८ असोज। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ९ स्थित आमा मिलन बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सातौं वाषिर्क साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाको सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीले गरेका थिए। साधारणसभामा सहकारीकी संस्थापक अध्यक्ष इन्दिरा पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो। एकल महिला धनकुमारी गुरुङ, पवित्रा गिरी, ज्येष्ठ सदस्य गंगाप्रसाद सुवेदी, खुमादेवी सुवेदी, करुणानिधि शर्मा,… पुरा पढौ
पोखरा, ८ असोज। पोखरामा आयोजित तीन दिने आधुनिक चुरा बनाउने तालिम आइतवार सम्पन्न भएको छ। स्वस्तिक हस्तकला उद्योग पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं १ को आयोजना तथा गुरुङ व्यूटी एकेडेमी न्यूरोडको संयोजनमा तालिम आयोजना गरिएको हो। तालिममा १५ जना सहभागी थिए। तालिममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश नं ४ की संयोजक शान्ति शर्मा र भगवती भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए।… पुरा पढौ
पोखरा, ८ असोज । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंक लि. वेष्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक अवार्डबाट सम्मानित भएको छ। न्यू विजिनेश एज प्रालिद्घारा काठमाडौमा आयोजित चौथो न्यू विज कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड-२०१७ मा गण्डकीले वेष्ट म्यानेज्ड अवार्ड पाएको हो। उक्त अवार्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले ग्रहण गरे । हाल गण्डकीसँग गाभिएको साविक फेवा फाइनान्स लि. यसअघि सन् २०१३ मा वेष्ट… पुरा पढौ
गौतमको ‘खोला छेउको खेत’ बजारमा
पोखरा, ८ असोज। पोखरा लेखनाथ-२८ काफ्लघारी निवासी कृष्णप्रसाद गौतमद्वारा लिखित उपन्यास 'खोल छेउको खेत’ विमोचन गरिएको छ। प्रमुख अतिथि उच्च अदालत स्याङजाका न्यायाधिश रमेशकान्त अधिकारी र नेपाल ज्योतिष परिषदका उपाध्यक्ष कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए। यसअघि २०६८ सालमा लेखक गौतमको 'दोषी आँखा’ र 'अर्काे एक’ भजन सङ्ग्रह बजारमा आइसकेका छन्। पुरा पढौ
कलम सहकारीको सातौं साधारणसभा
पोखरा, ८ असोज। पोखरा ९ पालिखेचोकमा रहेको कलम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सातौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासघंका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सुवेदीले पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीको सक्रियतामा खोलिएको कलम सहकारीको भविष्य राम्रो रहेको बताउदै सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सहकारीमानै कारोबार गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा कास्की बचत संघका सञ्चालक नरेन्द्र मित्रकोटीले आउन… पुरा पढौ
कोलपाटन सहकारी अध्यक्षमा पोख्रेल
पोखरा, ७ असोज। पोखरा १५ स्थित कोलपाटन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शनिबार सम्पन्न सातौं साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि रामचन्द्र पोख्रेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। समिति उपाध्यक्ष अम्बिका पराजुली, सचिव राजेन्द्र पराजुली, सहसचिव रामेश्वर थापा र कोषाध्यक्ष खेमबहादुर थापा चयन भए । समिति सदस्यमा धर्मराज पराजुली, रञ्जिता पोखरेल, यशोदा गौतम, संजिवी गौतम छन्। अनिल गौतमको… पुरा पढौ